कर्णाली योजना आयोगका पदाधिकारीले खाए सपथ - Paschimnepal.com
कर्णाली योजना आयोगका पदाधिकारीले खाए सपथ
कर्णालीको मानचित्र बनाउँछौं ः उपाध्यक्ष डा. रेग्मी
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले गठन गरेको योजना आयोगका पदाधिकारीहरुले सपथ तथा पदभार ग्रहण गरेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरुलाई पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गराउनु भएको छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुण्य रेग्मी तथा सदस्यद्वय डा. दिपेन्द्र रोकाया र योगेन्द्र शाहीले पद तथा गोपनियताको सपथ खानु भएको हो ।
सञ्चारकर्मीसंग संक्षिप्त कुरा गर्दै आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुण्य रेग्मीले कर्णाली प्रदेशको विकास लागि दुरदृष्टि राखेर योजना बनाउने बताउनु भयो । उहाँले कर्णाली प्रदेशको अहिलेको मानचित्र र नयाँ बन्ने कर्णालीको मानचित्र आयोगले तयार गरेर अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो ।
कर्णाली सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले मंसिर ४ गते प्रदेश योजना आयोगमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय योजना आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको पदेन सदस्यमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र सदस्य सचिवमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव छन् ।
प्रकाशित मितिः आइतवार, मंसिर ९, २०७५ 4:00:04 PM
Prevखानेपानी संकट टार्न उपत्यकामा दमाई खोलाबाट पानी ल्याइँदै
Nextमहोत्सवको विरोधमा वीरेन्द्रनगर बजार बन्द